Etu esi agba ọsọ ule A / B na ChangeAgain | Martech Zone
Otu esi agba ọsọ ule A / B na ChangeAgain
Fraịde, Machị 13, 2015 Douglas Karr
Ndi otu anyi si Gbanwee, ngwá ọrụ maka ule / b, nyere anyị ije a nke otu esi edozi usoro ọrụ maka nnwale nnwale a / b nke ziri ezi ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
Kedu ihe bụ ule A / B?
A makwaara dị ka gbawara n'etiti ule, ule a / b na-ezo aka na nsụgharị abụọ nke ibe weebụ ma ọ bụ ngwa - ụdị A na mbipute B. A / B nyocha nyocha na-enye ndị na-ere ahịa ohere itinye koodu n'ime ibe ha ma mezie nsụgharị abụọ ahụ na nyocha A / B. Ihe nyocha A / B na-achota uzo di iche na egosiputa onye obia nchịkọta na-nyere na nke onye rụrụ mma. A, arụmọrụ na-kegide a click-site na a oku na-edinam.
Usoro nke ịtọlite ​​ule A / B
Na-eme nkwupụta okwu - Brainstorm ndepụta nke okwu iri na ise nke ihe anaghị adaba na webụsaịtị gị, uru uru ọ bara abụghị nke doro anya, yana nke ịkpọ oku agaghị apụta. Na-ebute ha ụzọ site na mmetụta na ntụgharị gị na oge dị mkpa iji mejuputa ya. Họrọ nnwale nke ga-emetụtakarị ntụgharị a chọrọ obere oge iji mejuputa ya.
Debe ihe mgbaru ọsọ maka nnwale ahụ - Kwa nnwale ga-abawanye ụfọdụ metric nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnwere ihu ọdịda - mgbanwe ahụ kwesịrị imetụta bọtịnụ nbanye / ntinye.
Mepụta ọdịiche - Mgbe ị họọrọ nkwupụta ahụ ị ga-achọ ịgbanwe ma guzobe akara nwere ike ịchọta - mejuputa mgbanwe ahụ. Nzọụkwụ kachasị mkpa maka usoro ahụ bụ ịme naanị otu mgbanwe kwa mgbanwe. Ọ bụrụ na ị gbanwere aha nke ibe weebụ, agbanwela agba nke bọtịnụ ahụ, n'ihi na ọ ga-abụ ihe siri ike ịkọwapụta nsonaazụ ule ahụ. Nye onye mmebe na onye nrụpụta ọrụ ịkwadebe mgbanwe.
Ẹkedori nnwale - Dịka, nke a na-emezu site na ịgafe koodu ahụ site na nyocha A / B gị na usoro njikwa ọdịnaya gị ma na-enyere nnwale ahụ aka. Jide n'aka na ị nwalee ibe gị iji hụ na ebipụtara ule ahụ ka anwale.
Lelee nnwale ahụ karịa oge ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke nleta ebe ị kwenyesiri ike na nke ikpeazụ nchịkọta ga-ada ụda. Izu abụọ dị ezigbo mma maka saịtị nwere 100 ntụgharị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ n’inweghi mgbanwe karịa, ị ga-achọ ogologo oge.
Họrọ onye mmeri dabere na nsonaazụ ziri ezi. Amaghi ihe onu ogugu enwere ike? Ahu nagide Ule A / B Nnukwu Uru site na KISSmetrics.
Tinye mgbanwe ndị na-emeri gaa na saịtị gị. Wepụ koodu nyocha A / B ma dochie ya na ụdị mmeri nke A / B.
Bido ọzọ na # 1 iji kọwaa nsonaazụ ndị ọzọ ma ọ bụ bido nyocha ọzọ.
Nyocha A / B bụ usoro na-enweghị njedebe; ị kwesịrị inwe ike ịbawanye ọnụego ntụgharị gị ugboro 3 ruo 5 site na ule dị iche iche. Ọ bụghị nyocha niile ga-aga nke ọma mana mgbe ha dị, ọ bụ nnukwu ụzọ iji bulie arụmọrụ nke saịtị gị.
Banyere ChangeN'ihi ule A / B Ule
ChangeAgain na-enye ikpo okwu nke ọnụ ọgụgụ nnwale ị nwere ọnụahịa ya apụtaghị na mmetụta nke saịtị gị - na-enye aka ebe ọ bụ na nnukwu saịtị saịtị nwere ike ịdị oke ọnụ ịnwale. Ha nwekwara ụfọdụ iche atụmatụ, dị ka ikike ịmekọrịta ihe mgbaru ọsọ na Google Analytics na nchịkọta akụkọ nke na-achọ enweghị ahụmịhe nzuzo.
Tags: ule ulegbanweeGoogle Analyticsgoogle nchịkọta ihe mgbaru ọsọnyocha nyocha googleKedu ihe bụ nnwale
Soro Asọmpi Ntaneti Gị na Rivalfox